กรกฎาคม 2011 | ပိတောက်
ဘာကြောင့်ခင်ဗျားကခရစ္စ(ရှ်)နားနှင့်မှသွားတူစေချင်ရတာလဲ၊ ခင်ဗျားဘာများအမှားလုပ်ခဲ့လို့လဲ၊ ခင်ဗျားမှာ
ဘာအပြစ်များရှိလို့လဲ၊ ခရစ္စ(ရှ်)နားနဲ့တူမှကိုဖြစ်မှာလား၊ ဘုရားသခင်ကခရစ္စ(ရှ်)နားနောက်တစ်ယောက်ကိုမ
ဖန်ဆင်းခဲ့ဘူးလေ၊ ဘုရားသခင်ကနောက်ထက်အိန်စတိန်းတစ်ယောက်ကိုလည်းမဖန်ဆင်းခဲ့ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်
ဆင်းရှင်သာဖြစ်တယ်။ ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ရုံမဟုတ်ဘူး၊ ဖိုဒ့် (Ford) မော်တော်ကားစက်ရုံကဖိုဒ့်ကားတွေ
တစ်စီးပြီးတစ်စီးအဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်လိုက်တယ်၊ အားလုံးကတစ်ပုံစံထဲပါ၊ ဘုရားသခင်ကတော့ကမ္ဘာဦးရဲ့
လျှောက်လုံးသင်ကြားခံနေရတုန်းပါ၊ " ကြည့်လေအိမ်နီးချင်းကောင်လေးနဲ့တူရမယ်တဲ့၊ ဒီကောင်လေးကသိပ်
တော်တာသူ့ကိုအတုခိုးရမယ်" "ဟိုကောင်မလေးလမ်းလျှောက်တာတကယ့်ကိုသိမ်မွေ့တာပဲ၊ အဲဒီလိုဖြစ်နေရ
မယ်၊ " ခင်ဗျားက်ိုသူများနဲ့တူဖို့အနားမပေးပဲသင်ကြားနေကြတယ်။
တိုင်ကရိုသေလေးစားရမယ်၊ ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ဆောင်မွန်ဖြစ်တယ်၊ လုံးဝမတုပပါနဲ့၊ ဒါဟာခင်ဗျားကို
လုံးဝလိုက်မတုပပါနဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာတည်ဆောက်ပါ၊ ဒါဟာဘုရားသခင်အပေါ်ထားတဲ့ခင်ဗျားရဲ့
၀တ္တရားပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထူထောင်ပါ၊ ရိုးသားမှုနှင့်သစ္စာရှိရှိမိမိဘာသာရပ်တည်ပါ၊ ဒါမှသာခင်ဗျားဟာထူးခြား
ဆွေသင်္ဂဟ၊ ဇနီးသားမယား၊ ဆရာသမား၊ သူတို့တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးရလာတာမဟုတ်ဘူး၊ ခင်ဗျားရဲ့ထူးခြားရတဲ့
ရာကောင်းတဲ့မြွေကလေးရယ်၊ မင်းမှာခြေထောက်မရှိပဲဘယ်လိုသွားမှာလဲ၊ ဥပမာအနေနှင့်ပြောရရင်မြွေက
တယ်၊ ကင်းခြေများပြောချင်တာက "ဒီမြွေကသနားစရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်၊ ငါ့မှာခြေထောက်အချောင်း
တစ်ရာတောင်ရှိတယ်၊ သူ့မှာတော့ခြေထောက်တစ်ချောင်းတောင်မရှိရှာဘူး၊ သူဘယ်လိုများလမ်းသွားပါလိမ့်၊ သူ့မှာအနည်းဆုံးခြေထောက်နှစ်ချောင်းလောက်တော့ရှိမှဖြစ်မှာပေါ့၊" အကယ်၍သာကင်းခြေများကဒီမြွေအတွက်ခြေထောက်အနည်းငယ်ကိုလက်တွေ့ကျကျသွားတပ်ပေးမယ်ဆိုရင်
ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်ဆင်းရှင်ကိုရိုသေခြင်းပဲဖြစ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားဟာဘုရားသခင်ရဲ့စက္ကူ
ရိုသေလေးစား ၊ကြိုဆိုလက်ခံ၊ ရှင်းလင်းစွာသိမှတ် ဒါဆိုရင်ထူးခြားအောင်ပြောင်းလဲချင်တဲ့
မိုက်မဲသောကြိုးပမ်းမှုများအားလုံးဟာပျောက်ကွယ်သွားကြမှာပဲဖြစ်တယ်။ ရဲထက်(မဟေသီ Sep.. 2010)
ရေးသူ ပိတောက် အချိန် 23:040comments
"ဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုဘာမှပြန်မဖြေသေးပါဘူး" ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးကဲပြုံးပြီးပြန်ပြောတယ်၊ "ကျွန်ုပ်ဒီကနေ့
အောင်၊ လပြည့်ဝန်းကမိုးယံမြင့်မှာအထင်းသားရှိနေတယ်၊လလွန်းတဲ့ညတစ်ညပါပဲ" လို့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးက
ပါမောက္ခကိုဆက်ပြောပါတယ်၊ "ကြည့်စမ်းပါ၊ ဒီဆိုက်ကရက် (cypress) ပင်ကိုအလွန်ကြီးထွားသန်စွမ်းတဲ့ဆိုက်ပ
ရက်ပင်ကြီးဖြစ်တယ်၊ သူရပ်နေတာမြင့်မားလွန်းလို့လကိုတောင်ထိတော့မယောင်ဖြစ်နေပြီ၊ ပင်ဖျားကဝေဆာ
နေတဲ့အညွန့်တွေကိုလည်းလရောင်ဆမ်းလို့လွှမ်းခြုံထားတယ်၊ ပြီးတော့ဒီအပင်ငယ်ကလေးကိုလည်းကြည့် စမ်းပါဦး' ပါမောက္ခကမအောင့်နိူင်တော့ပဲပြန်ပြောတယ်။ "ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ၊ ကျွန်တော်ပြောတဲ့မေးခွန်းကိုမေ့နေပြီလား" ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးကပြန်ဖြေတယ်၊ " သင့်ပြဿနာကိုကျွန်ုပ်ဖြေကြားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊
ပြီ၊ ဒါပေမယ့်အပင်ငယ်ကလေးကဆိုက်ပရက်အပင်ကြီးကို "ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားနဲ့မတူရတာလဲ" လို့မေးတာကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမကြားခဲ့ဖူးသလိုဆိုက်ပရက်ပင်ကြီးကအပင်ကငယ်လေးကို "ဘာကြောင့်ငါကမင်းနဲ့
မတူတာလဲ" လို့မေးသံမကြားခဲ့ဖူးပါ၊ ဆိုက်ပရက်ကဆိုက်ပရက်အပင်၊ အပင်ငယ်ကအပင်ငယ်ပဲမဟုတ်လား၊
ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်၊ခင်ဗျားခင်ဗျားပဲဖြစ်တယ်၊ နှိုင်းယှဉ်မှုကပဋိပက္ခကသယ်ဆောင်တနိူင် တယ်၊ နှိုင်းယှဉ်မှုကလောဘစိတ်ရိုင်းတွေသယ်ဆောင်နိူင်တယ်၊ အကယ်လို့ခင်ဗျားကကျွန်တော့်ကိုမေးမယ်၊
"ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့မတူတာလဲ" ဒီလိုမေးပြီဆိုကတည်းကခင်ဗျားကကျွန်တော်နဲ့တူဖို့စတင်စမ်း သပ်နေပြီဖြစ်တယ်၊ ဒါဟာခင်ဗျားရဲ့တည်ရှိမှုတစ်ခုလုံးအတွက်ကွဲအက်မှုဖြစ်တယ်၊ ခင်ဗျားအတုခိုးသူတစ်
လောက်တောင်မလွယ်ကူရတာလဲ၊ အကြောင်းကတော့ခင်ဗျားအတုခိုးခြင်းကိုသင်ယူမိလို့ပဲ၊ ခင်ဗျားငယ်စဉ် ကတည်းကကြားနေရတာ "ကြီးလာရင်သိပ်ပံ ပညာရှင်အိုင်စတိုင်း (Einstein) နဲ့တူရမယ်" အယ်ဒီဆင် (Edison) နဲ့တူရမယ်၊"ဒါဘာကြောင့်ပါလဲ၊ ဘာလို့များ ခင်ဗျားကအိုင်းစတိန်းကတော့ခင်ဗျားနဲ့တူဖို့တစ်ခါမှ မစဉ်းစား ခဲ့ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိုင်စတိန်းက အိန်စတိန်းဖြစ်လို့ပါ။
ရေးသူ ပိတောက် အချိန် 15:320comments
Sapphire လို့ခေါ်တဲ့ နီလာ...စိတ်ကိုဖြူစင်သန့်ရှင်းစေနိူင်သည်၊ ပစ္စည်းရှင်အားလာဘ်ကောင်းစေသည်၊ မိမိအပါဝင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒုက္ခမပေးတတ်ပါ။
ရေးသူ ပိတောက် အချိန် 16:140comments
သိမ်းသွင်းလိုက်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာဘုရားသခင်လက်ခံထားတာဖြစ်လို့ပဲ၊ ဘုရားသခင်ဒါကိုကရု
ဏထားပေမယ့်ခင်ဗျားကဘယ်တုန်းကမှခင်ဗျားရဲ့တည်ရှိမှုကိုလေးစားသမှုမပြုခဲ့ပါဘူး၊ ဘုရားသခင်က ခင် ဗျားကိုတည်ရှိစေခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်မြင်ခိုင်းတယ်၊ မက်မောစရာတေးဂီတတွေနားဆင်၊ မိုးကောင်းကင်နှင့်ကြယ်တာရာတွေ ကိုရှုစား၊ လူသားမျိုးနွယ်ကိုမြင်တွေ့စေခဲ့တယ်။ ချစ်တတ်သူနှင့် အချစ် ခံရ သူ ဒါတွေအားလုံးဟာအလွန် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်၊ ဒါနဲ့တောင်ခင်ဗျားက ဘာလို့များထပ် ပြီး တောင်းဆို နေရသေးတာလဲ၊ ပကတိတည်ရှိမှု ကိုဂုဏ်ပြုကြိုဆိုလိုက်စမ်းပါ၊ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ကိုအ ကြိမ်ကြိမ်အခါခါဂုဏ်ပြုကြိုဆိုမှုထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လျှပ်စီးလက် သလိုပေါက်ကွဲထွက်လာမယ်၊ အဲဒီအခါ မှာခင်ဗျားသိမယ်၊ ခင်ဗျားဟာနဂိုကတည်းကထူးခြားသူဖြစ်တယ်။
လွန်ထူးခြားသူဖြစ်တယ်) ဟိုယောင်္ကျားထက်ငါကပိုပြီးထူးတယ်၊ ဒီမိန်းမထက်ငါပိုသာတယ်ဆိုတာအမှန်တော့
အတ္တရဲ့ဆော့ကစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားနားမလည်သေးတာပဲဖြစ်တယ်၊ ခင်ဗျားမှာအလွန်ထူးခြားမှုမ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်နှိုင်းယှဉ်မှုကရလာတဲ့ထူးခြားချက်တော့မဟုတ်ဘူး၊ ခင်ဗျားဟာနဂိုမူလကထူးခြားပြီးသား
အသိမျိုးမရှိရတာလဲ၊ ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတောင့်တမှုပဲဖြစ်ပါတယ်" ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးကပြန် ပြောတယ်၊ "ခဏလေးစောင့်ပြီးအရင်ဆုံးငြိမ်သက်စွာထိုင်ချလိုက်ပါ၊ပြီးတော့ကြည့်စမ်းပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်၊ မိမိ
ရင်ကျွန်ုပ်သင့်ကိုပြန်ဖြေကြားပါမယ်" တစ်နေ့လုံးလူတွေက၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ပြတ်တယ်မရှိဘူး၊ တပည့်
လက်အေးမထိုင်နိူင်ပါဘူး၊ အချိန်ကလဲတစတစနဲ့ပြုန်းတီးသွားခဲ့ပြီ၊ ဒါပေမယ့်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးပြောတာက
မောက္ခကပြောတယ်၊ "ဒုက္ခမှတကယ့် ဒုက္ခ၊ ငါ့မှာစောင့်လိုက်ရတာတစ်နေကုန်ပဲ၊ ငါ့ပြဿနာကဘယ်လိုလုပ်
မှာလဲ' လရောင်ကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီ၊ အဲဒီညကလပြည့်ညချမ်းပါ၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးကမေးတယ်
" အဖြေမရသေးဘူးလားပါမောက္ခကြီး" ပါမောက္ခကပြန်ပြောတယ်။
ရေးသူ ပိတောက် အချိန် 15:570comments
If you basic needs are covered, you are richer than 75% of the rest of the world.
သင်ဟာသင့်ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအကုန်ပြည့်စုံမှုရှိနေမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၇၅% ထက်သင်ပိုချမ်းသာပါသေးတယ်။
If you even have some savings, you are part of the 10% of the most prosperous people in the world.
If you smile and appreciate life, you are lucky because lots of people can, but they don't.
ရေးသူ ပိတောက် အချိန် 14:460comments
ပတ်ကြားအက်တဲ့ခြေလက် ၊ ညနေတိုင်းတခုတ်တရ
ထုတ်လာတဲ့ဗလာစာအုပ် ၊ လက်ရေးစောင်းစောင်း
အားတဲ့ညနေထမင်းချက် ၊ သားသမီးတွေကျောင်းအပြန်
စားရဖို့ဝယ်ခြမ်းချက်ပြုတ် ၊ “စားကောင်းလိုက်တာအဖေ”
“စား ၊ စား” ၀မ်းအပြင်အိတ်မပါဘူးတဲ့လား။
သားသမီးတွေအိမ်အပြန် ၊ ထမင်းမစားနိုင်အောင်အပျော်လွန်
ပိတ်ရက်ရယ်လို့ ၊ စုံစုံညီညီ
အဖေ့နားမရှိ ၊ အဖေမရှိမှ
ဘေးပတ်ပတ်လည် ၊ ၀ိုင်းနေထိုင်ကြလေရဲ့။
ခေတ်ကြောင့်လား ၊ စနစ်ကြောင့်လား
အဖေတစ်ယောက်က ၊ သားသမီးတွေအတွက်
အလျင်မှီပေမယ့် ၊ ဒီလေးယောက်က
နီးအောင်လာခဲ့ရပေမယ့် ၊ ဝေးနေရတဲ့အဖေ
နေရာစိမ်းမှာ ၊ အထီးကျန်လို့
အဖေမရှိမှ ၊ တရေးရေးမြင်
ပေးသလောက် ၊ မလောက်နိူင်တဲ့
သားသမီးတွေအတွက် ၊ ခွင့်လွတ်ပေးပါဆိုတာနဲ့
ရေးသူ ပိတောက် အချိန် 14:310comments
ရေးသူ ပိတောက် အချိန် 14:080comments
ရေးသူ ပိတောက် အချိန် 12:520comments